Ancelotti oo qorsheynaya inuu fasax toban bilood ah ka qaato maamulidda Kubada Cagta. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Ancelotti oo qorsheynaya inuu fasax toban bilood ah ka qaato maamulidda Kubada Cagta.
Muqdisho – Carlo Ancelotti ayaa xaqiijiyay inuusan mar kale maamuli doonin xilli ciyaareedkan koox madaama diirada u saaran yahay kooxo badan.
Tababaraha Talyaaniga ayaa si fantastik ah looga ceyriyay Bayern Munich todobaadkii la soo dhaafay 10 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedka cusub, lakiin waxa uu 3-0 ka qaabilay Paris Saint-Germain.
Wargeyska ayaa soo jeediyay in Ancelotti uu doonayo inuu bedelo Arsene Wenger isagoo Arsenal ninka laylyiya ee Faransiiska uu cadaadis saaran yahay xilli ciyaareedkan Emirates. Wenger ayaa saxiixay heshiis labo sanno ah xagaagii, laakiin wuxuu aqbalay inuu ka tagi doono kooxda hadii Arsenal ay ku dhameysato meel ka Hoosaysa kaalinta afaraad ee horyaalka.
Wax kasta oo ka dhaca Arsenal, Ancelotti ayaa go’aansaday inuu u baahan yahay waqti fasax ah ka hor inta uusan dib ugu soo laabanin maamulka. ‘Tobanka bilood ee soo socda waan nasan doonaa, ma doonayo inaan tababaro koox kasta,” ayuu u sheegay Sky Italia.
Bayern ayaa ceyrisay Ancelotti iyadoo ay ugu wacan tahay kacdoonada sii kordheysa ee ciyaartoydiisa, kooxda ayaana shan dhibcood ka danbeysa hogaamiyeyaasha Bundesliga, Borussia Dortmund.
Waxaa jiray warar qarsoodi ah oo ka sheegaya xiddigaha Bayern in ay ka danbeeyeen tan iyo markii Ancelotti lagu qasbay inuu ka tago kooxda Jarmalka. Laakiin, markii la weydiistay inuu ka tago Bayern Ancelotti ayaa yiri: “Waa ay fiicantahay inaan iska aamuso.” Xitaa waxaa la sheegayay inuu ka dhaqaaqayo Ancelotti xilli ciyaareedkii hore inkastoo Bayern ay ku guuleysatay Bundesliga.
Taageerayaasha Arsenal ayaa u muuqda mid ku faraxsan inay Ancelotti bedeli doono Wenger 58-sano jirkaan ayaana dhisi karo oo usoo celin kara sharaftoodii. Xiddigaha Chelsea, Real Madrid iyo AC Milan ayaa dhamaantood kula guulaystay koob weyn iyadoo Ancelotti uu seddex koob oo Champions League ah ku guuleystay waayihiisii tababaraha.
Previous: United oo war aan u wanaagsanayn uga yimid Xerada Tababbarka Belgium.
Next: Morata oo qarka u saaran inuu garoomada seego lix isbuuc.